युवा नेताको छवि बनाएका पौडेललाई यसपटक देशभरिका युवाहरुले महामन्त्रीमा उठ्न दबाब दिएका छन् । - इ-दैनिकी
युवा नेताको छवि बनाएका पौडेललाई यसपटक देशभरिका युवाहरुले महामन्त्रीमा उठ्न दबाब दिएका छन् ।
असार २२, २०७८ ०८;४० मा प्रकाशित
काठमाडौं, २१ असार । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वमा को आउने भन्नेबारे रस्साकस्सी सुरु भएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा पूनः दोहोरिनेगरि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि तयारी थालेका छन् । देउवाको क्याम्पबाट यसपटक सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका विमलेन्द्र निधिले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् ।
उनले पछिल्ला दिनमा सभापतिका अन्य आकांक्षीदेखि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि छलफल गरेका छन् । रमाईलो त के भने निधिसँगै सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच यो बीचमा दुई पटक छलफल भैसकेको छ ।
सुरुमा निधि निवास बानेश्वरमा छलफलमा जुटेका यी नेता दोस्रो पटक सिंहको चाक्सीबारीमा छलफलमा बसेका थिए । ती तीन नेताहरु विपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायणका पुत्र हुन् । कांग्रेसमा विपी, गणेशमान र महेन्द्रको गौरवमय इतिहास छ । निधि, कोइराला र सिंहबीच १४औं महाधिवेशनमा एकखालको समिकरण बन्ने चर्चा चलेको छ । तर, उनीहरुबीच नेतृत्वमा कसरी सहमति हुन्छ ? भन्ने कुराको अहिले कुनै सुनिश्चितता र बलियो आधार भने देखिएको छैन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा आफू उठ्ने भन्दै तयारी र भेटघाट थालेका छन् । पौडेल समूहबाट पनि यसपटक सभापतिको लागि आधा दर्जन आकांक्षीहरु देखिएका छन् । यो समूहले अन्तिममा सहमतिकै आधारमा उम्मेद्धवार तय गर्ने घोषणा गरेको छ । पछिल्ला वर्ष कांग्रेसमा युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडतोडले उठ्ने गरेको छ ।
तर, युवा नेताहरु भने नेतृत्वमा आउनको लागि त्यति तयार भएको भने देखिएको छैन् । १४औं महाधिवेशनमा यसपटक युवा नेताहरु नै आउने बुझिएको छ । देउवाले पनि आफ्नो समूहबाट युवालाई महामन्त्रीबाट अगाडि बढाउनेगरि गृहकार्य थालेको बुझिएको छ । यता, पौडेल समूहबाट पनि युवालाई अघि सार्ने तयारी छ ।
महामन्त्रीमा यसपटक गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलको नाम चर्चामा छ । १३औं महाधिवेशनमा गगन त महामन्त्रीमा उठेका थिए । अहिलेपनि उनी महामन्त्रीकै दाबेदार हुन । कांग्रेसमा ईमानदार युवा नेताको छवि बनाएका पौडेललाई यसपटक देशभरिका युवाहरुले महामन्त्रीमा उठ्न दबाब दिएका छन् ।
विचारमा स्पष्ट र संगठन निर्माणमा जुझारु नेताको रुपमा परिचित पौडेलले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा आफू महामन्त्री लड्ने भनेर घोषणा गरेका छैनन् । तर, देशभरिका युवा नेताहरुको प्रेसरका कारण उनीपनि यसपटक महामन्त्रीमा लड्ने तयारीमा पुगेको उनीनिकट युवा नेताहरुको दाबी छ । पौडेललाई वरिष्ठ नेता पौडेलदेखि कृष्ण सिटौलासम्मले रुचाएका छन् ।
अहिले कांग्रेसको क्रियाशिल छानबिन समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत पौडेलले पाएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका पौडेल २०७४ को निर्वाचनमा तनहुँबाट झिनो मतले पराजित भएका थिए । संसदमा नपुगेपनि उनले कोही जनप्रतिनिधिभन्दा कम काम गरेका छैनन् । पौडेल जनतासँगै नजिक हुने नेताको रुपमा लोकप्रिय छन् । कोभिड महामारीमा समेत उनले कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए र जनताको उपचारमा राहत पुर्याएका थिए